XOG: Kaddib Go'aankii Lionel Messi Kaga NIXIYEY Barcelona, Waa Kuwaa Kuwan Saddexda Kooxood Ee La Filayo Inuu Midkood Ku Biiro - Gool24.Net
XOG: Kaddib Go’aankii Lionel Messi Kaga NIXIYEY Barcelona, Waa Kuwaa Kuwan Saddexda Kooxood Ee La Filayo Inuu Midkood Ku Biiro
Lionel Messi ayaa shaaciyey go’aankii laga sugayay maalmahan, waxaanu si cad ugu wargeliyey kooxdiisa inuu doonayo inuu iska tago oo ay iyaguna si sharaf leh usii ambobixiyaan maadaama uu cimrigiisa oo dhan usoo hibeeyey, isla markaana uu ku hoggaamiyey guulihii ugu badnaa taariikhda kooxda.
Faraaq uu ku diray FAX ayaa uu Messi kaga codsaday madaxda kooxda inay fududeeyaan bixitaankiisa oo ay u hirgeliyaan qodobkii ku jiray heshiiskooda ee dhacay bishii June ee dhigayay inuu si xor ah iskaga tegi karo haddii uu isagu go’aanka gaadho, laakiin qodobkaas oo dhacay laba bilood ka hor ayaan la ogeyn sida uu ugu shaqayn doono waqtigan iyo haddii kooxdu aqbali doonto dalabkiisa.
Kaddib go’aanka uu laacibkani ka gaadhay mustaqbalkiisa, waxa soo baxaya magacyada kooxaha sida weyn u doonaya ee ku tartami doona saxeexiisa, kuwaas oo waliba rajaynaya inay si bilaash ah ku heli doonaan haddii qodobka uu Messi dalbaday loo ogolaado in lagu sii daayo.
Sida uu qoray wargeyska Marca, saddex kooxood oo ka dhisan qaaradda Yurub ayaa heegan ugu jira ciyaartoygan, waxaanay markii uu soo baxay go’aanka laacibkani ay hawl-geliyeen shaqaalahooda suuqa oo laacibkan ku qancinaya inuu iyaga kusoo biiro, waxaanay adeegsanayaan ballan-qaadyo iyo saamaynta ay leeyihiin taariikh ahaan, taas oo ay dheer tahay wax kasta oo qancin karaya laacibkan oo ay isku dayayaan inay hor dhigaan.
Saddexda kooxood ayaa illaa hadda ugu cadcad, waxaana ugu horreysa Inter Milan oo u ballan-qaaday heshiis saddex sannadood ah iyo mushaharkii ugu badnaa.
Inter Milan ayaa u diyaarisay laacibkan 260 milyan Euro, taas oo ka dhigan in mushaharka uu Barcelona ka qaato waqtigan uu mid ka badan ama u dhigma ku heli doono Talyaaniga.
Wargeyska La Gazzetta dello Sport ayaa Jimcihii boggiisa hore ku daabay in Nerazzuri ay ka go’an tahay inay hesho Messi, si horyaalka Serie A uu mar kale uga bilaabmo hirdankii u dhexeeyey xiddigan reer Argentine iyo Cristiano Ronaldo oo isaguna Juventus joogay labadii sannadood ee ugu dambeeyey.
Kooxda labaad ee ay suurtogalka tahay inuu tago Lionel Messi ayaa ah Manchester City oo uu joogo Pep Guarrdiola oo ay aad iskugu dhow yihiin laacibkan, isla markaana ay guulo badan wada gaadheen sannadihii ay Camp Nou rafiiqa ku ahaayeen.
Manchester City ayaa raadinaya inay ku guuleysato tartanka Champions League iyagoo muddo toban sannadood ka badan oo lacag waalli ah la geliyey ay haddana awoodi kari la’ yihiin inay ku guuleystaan koobkan.
Etihad Stadium waxa Lionel Messi uu ka heli karaa mushahar badan, waxaana sidoo kale jooga Sergio Aguero oo ay saaxiibbo dhow yihiin.
Kooxda reer France ee Paris Saint-Germain ayaa naadiga saddexaad ee uu Lionel Messi u dhaqaaqi karayo ah. PSG waxay xili ciyaareedkan soo gaadhay finalka Champions League oo Bayern Munich ay koobka kaga guuleysatay, waxaanay doonayaan inay helaan xiddig kale oo kusoo kordhiya tallaabada ka dhiman si ay koobkan u qaataan.
Waxa Parc des Prince ku sugan Neymar oo ay saaxiibo yihiin Lionel Messi iyo Kylian Mbappe oo si wanaagsan ula shaqayn kara, halka Verratti uu yahay mid sidii Xavi Hernandez oo kale ugu keeni doona kubbadaha.
Dhinaca lacagta ayay PSG awood u leedahay inay siiso Lionel Messi wax kasta oo qancin karaya, waxaanay haystaan maalqabeennada reer Qatar oo wali diyaar u ah inay qasnaddooda u jabiyaan.